စက်ရုံစျေးနှင့်အတူအောက်ဆီဂျင်ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုစက် China Manufacturer
Hunan Eter Electronic Medical Project Stock Co., Ltd. [Hunan,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Africa , Asia , Caribbean , East Europe , Middle East ထုတ်ကုန်:11% - 20% Cert:ISO13485, ISO9001, OHSAS18001, ASME, CE ဖေါ်ပြချက်:အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုစက်,အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုစက်စျေး,အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုစက်စက်ရုံ
Home > ထုတ်ကုန်များ > အောက်စီဂျင် Cylinder ဖြစနစ် > Compact အောက်ဆီဂျင် Cylinder ဖြစနစ် > စက်ရုံစျေးနှင့်အတူအောက်ဆီဂျင်ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုစက်
Filling Capacity:: 2-400 Bottle
Cylinder Refill သည် PSA အောက်ဆီဂျင်ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုစက်
PSA အခြေခံမူနှင့်အတူ Cylinder Refill အဘို့အ ETR နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်-တပ်ဆင်ထား PSA အောက်ဆီဂျင်ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုစက်ချုံ့ဝေဟင်မှတိုက်ရိုက် 93% ± 3% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုစက် Atlas Copco လေကြောင်း Compressor, SMC ရေခဲသေတ္တာလေကြောင်းလေမှုတ်စက်နှင့် filter, လေကြားခံအကြံပေးအဖွဲ့နှင့်အောက်စီဂျင်ကြားခံအကြံပေးအဖွဲ့, ETR PSA အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့စက်, အောက်စီဂျင်အာနိသင်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အောက်စီဂျင် Refill ဘူတာရုံပါဝင်သည်ဖြစ်ပါတယ်။
3. အောက်ဆီဂျင်ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုစက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်
ETR အင်ဂျင်နီယာ & နည်းပညာ, client များ ETR ဖြေရှင်းချက်များ၏အရည်အသွေးသေချာစေနိုင်ပါတယ်။ ETR သာအကောင်းဆုံးပေးသွင်းခြင်းနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုသည်။ ထိုလူအပေါင်းတို့အောက်စီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုစက်သူတို့စက်ရုံစွန့်ခွာမတိုင်မီအရာအားလုံးအရည်အချင်းပြည့်ဖြစ်ပါသည်သေချာစေရန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျွမ်းကျင်သူများကအားဖြင့်စမ်းသပ်ပြီး & ပြန်တမ်းနေကြသည်။
4. အောက်ဆီဂျင်ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုစက် မော်ဒယ်ကို Select လုပ်ပါ
အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုစက် အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုစက်စျေး အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုစက်စက်ရုံ အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်စက် အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုစက် အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစက်ရုံ အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့လုပ်ခြင်းစက်